Hafatry ny fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara
Io Tenin’i Jesoa Kristy tafatsangan-ko velona, niseho tamin’ny mpianatra nihidy tao an-trano noho ny tahotra io, no entinay hiarahabana anareo sy hitsidihanay ny tokantranonareo tsirairay amin’izao fotoan-pitsapàna lalovantsika, mbola miady amin’ny ny valan’aretina Covid_19 izao.
Nanapa-kevitra koa izahay, fa tsy ho tanterahina amin’ity taona 2020 ity ny fankalazana ny Kongresy Eokaristika nasiônaly sy faha-100 taonan’ny FET, saika hatao any Antsiranana amin’ny volana Aogositra sy ny Fihaonamben’ny ankizy (JNE) saika hatao any Fianarantsoa amin’ny volana septambra.
Tao anatin’ny fotoanan’ny Karemy sy ny fankalazana ny Paka tokoa no nitrangan’ity valan’aretina tsy hita maso ity ka nanohina ny fiainan’ny olombelona rehetra na ara-nofo izany na ara-panahy. Nasehon’ity valan’aretina ity tokoa ny maha-marefo antsika olombelona sy ny fetrantsika ka tsy misy afa-bela na ireo firenena matanjaka na ireo mbola eo andalam-pivoarana.
Tsapa anefa fa nampitodika antsika tamin’ilay Andriamanitra Mpahary, niandohàna sy hiafaràna, ka na tsy afaka niara-nankalaza Azy tany am-piangonana aza isika, indrindra tamin’ny fotoanan’ny Paka izay manan-danja tokoa amin’ny finoana kristianina dia naneho kosa ny hetahetantsika lalina hivavaka bebe kokoa sy hitoky amin’ny herin’ilay Mahefa ny zavatra rehetra.
Isaorana ny Papa Ray Masina Fransoa naneho hatrany ny aaha Ray aman-dreny mpampiombona, nanentana ny olombelona rehetra maneran-tany, na inona na inona finoany, hitodika amin’Andriamanitra sy hiombom-peo hivavaka handresena ny valan’aretina ary maneho mandrakariva koa ny maha-akaiky azy amin’ny teny fankaherezana sesilany sy fihetsika mitory fitiavana sy fanantenana, narahintsika tamin’ny haino aman-jery sy ny tambazotran-tserasera sosialy.
“Matokia, efa nandresy an’izao tonto izao Aho!” (Jn 16, 33)
Aoka anefa tsy ho hadino koa fa mifanindran-dàlana amin’ny fiparitahan’ny Coronavirus ny firongatry ny tazomoka sy ny dingue ary ireo aretina hafa mahazatra izay amoizana ain’olona maro kokoa aza saika manerana ny nosy koa heverinay fa fotoana izao hijerena akaiky izay fomba hanatsaràna ny fahasalamam-bahoaka amin’ny ankapobeny.
Anisan’ny mampitebiteby sy mampametram-panontaniana ny maro ny lafiny fanabeazana noho ny taom-pianarana tapaka an-tenantenany. Sanatria ho taona fotsy ve ity taom-pianarana ity? Manantena ny hisian’ny sori-dàlana mazava avy amin’ny tompon’andraikitry ny fampianarana isan’ambaratonga mba hampisinda ny tebitebin’ny tanora sy ny ray aman-dreny.
« Aoka ny matanjaka hitsimbina ny osa, … ny mpanan-karena hanome ny mahantra, ny mahantra hisaotra an’Andriamanitra nanome olona hitsimbina azy teo amin’ny fahoriany” hoy Md Clément
Iaraha-mahalala fa ny fepetra fijanonana an-trano dia nisy fiantraikany avy hatrany tamin’ny lafiny toekarena sy ny fiveloman’ny isan-tokantrano sy ny isam-batan’olona ka nanosika hiroso bebe kokoa amin’ny fifampitsinjovana sy fifampizaràna, izay sady soa toavina malagasy no soatoavina kristianina. Ankasitrahana indrindra ny tompon’andraikitra ara-panjakana sy ireo malala-tànana na avy eto an-toerana na avy any ivelany ary ireo mpilatsaka an-tsitrapo niandraikitra ny fizaràna. Ny irariana dia mba hisy ny fahamarinana sy ny mangarahara amin’ny fitantanana ny fanampiana rehetra ka tsy hisy ny hahatsiaro tena ho hadino indrindra ireo tena marefo sy ireo any amin’ny tany lavitra andriana.
Mampalahelo anefa indrisy ny mahita fa mbola misy ihany ny zatra lalan-dririnina ka amin’ny fotoan-tsarotra toy izao avy no mbola sahy manodinkodina ny fanampiana tokony ho zaraina, ho an’ny tombontsoan’ny tena manokana. Hita ho nirongatra koa tato anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao ny asan-dahalo sy ny fandrombàna. Aoka mba hanohina ny fontsika izao fotoan-tsarotra diavintsika izao ka hibebahantsika sy hialàntsika amin’ny ny fitiavan-tena mitondra amin’ny fanararaotana sy ny kolikoly.
Na dia eo aza anefa ny fitsapàna maro nolalovana indrndra ny fisian’ny tondra-drano sy ny haintany dia mampisaotra an’Andriamanitra kosa fa amin’ny ankapobeny dia tsara ny vokatry ny tany tamin’ity taona ity ka mahavelombolo ny tantsaha any amin’ny faritra maro.
Ny tanjona iombonantsika dia ny hamongotra tanteraka ity valan’aretina ity eto amin’ny Nosintsika, mba ho tanteraka amintsika tokoa ny « Fiadanana » nomen’i Kristy an’ireo Apôstoly ka ho faly sy ho salama ny mponin’i Madagasikara. Ilàna firaisan-kina sy firaisam-po ary fafanomezan-tànana izany ka aoka re mba hampandeferina ny hampom-po diso toerana ary tsy afangaro ny adilahy politika sy ny tolona ara-pahasalamana izay iarahantsika miatrika. Matoky ny fahendrentsika mpiray tanindrazana izahay Eveka.
Hamafisinay etoana àry ireo teny fanentanana efa nataon’ny Kardinaly Désiré TSARAHAZANA, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, indrindra ny amin’ny tokony anarahan’ny tsirairay ireo fepetra rehetra napetraky ny tompon’andraikitra ara-panjakana mba ho fiarovana ny aintsika sy ny ain’ny hafa ary mankasitraka an’ireo rehetra tsara sitra-po nanaraka izany amim-pitiavana sy amim-piniavana fa mitory fitiava-namana lehibe ny ezaka ataontsika tsy hiparitahan’ity valan’aretina ity. Aoka hifampahatoky isika! “Soa iombonana ny fahasalamana” ka mila iezahana arovana fatratra
« Mitoera ao an-tanàna ianareo mandra-pandraisanareo ny Hery avy any ambony » (Lk 24, 49). “Niray saina izy rehetra ary naharitra nivavaka, … niaraka tamin’i Maria Renin’i Jesoa” Asa 1, 14
Efa hatramin’ny fotoana nitrangan’ity valan’aretina ity isika no tsy nitsahatra nitodika tany amin’ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra nitalaho ny famindram-pony sy ny fitantanany ary ny fiarovany. Koa tohizantsika ny vavaka entanin’ny finoana sy ny fanantenana fa i Jesoa Kristy nandresy ny fahafatesana sy ny herin’ny ratsy rehetra dia tsy hamela antsika ho irery. Koa aorian’izao fitsapàna lalovantsika izao dia hibaliaka ny masoandron’ny fiadanana sy ny hasambarana izay nirariany hiainantsika. Tianay ny maneho etoana ny fiaraha-miory amin’ireo fianakaviana namoy ny havany noho ireo valan’aretina niseho teto amin’ny firenentsika ary manankina ny fanahin’ireo nodimandry eo ampelan-tànan’Andriamanitra. Mankahery sy mivavaka ho anareo rehetra izay mbola tsaboina mba hahazo fahasitranana. Antoka hiverenan’ny fahasalamana haingana ny fanehoantsika fitiavana ireo marary koa manentana ny mpiara-monina mba tsy hanilika ireo havantsika mitondra ny tsimok’aretina.
Anatin’ny volan’i Masina Maria, mpiaro an’i Madagasikara isika izao. Ankinitsika amin’ny vavaka ataony ny fiainantsika manontolo hahita fahombiazana sy fahasalamana. Tsy ho ela koa ny fankalazana ny fetin’ny Pantekoty, handraisantsika ny afon’ny Fanahy Masina. Koa mamporisika antsika hanao ny vavaka hasivian’andro fiomànana, manomboka ny zoma aorian’ny ankalazàna ny niakaran’i Kristy any an-danitra. Koa hamafiso mandrakariva ny finoana.
« Ray ô, ampio izahay hahatahiry ny fahasoavana nomenao, hahavelona mandrakariva ao aminay ny fanomezan’ny Fanahy Masina !».